Wafdi ka socda GMDQ oo Dhuusamareeb u jooga furitaanka xafiis goboleedka Guddiga ee Galmudug – GMDQ
Wafdi ka socda GMDQ oo Dhuusamareeb u jooga furitaanka xafiis goboleedka Guddiga ee Galmudug
Wafdi ka socda GMDQ oo booqasho shaqo ku jooga magaalada Dhuusamareeb ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa la kulmay madaxa xukuumadda Galmudug Sh. Maxamad Shaakir. Kulankan ayaa ka dhacay xafiiska madaxa xukuumadda ee Dhuusamareeb. Marwo Xaliimo Ismaaciil, gud. Guddiga oo hoggaamineysa wafdiga Guddiga ayaa madaxa xukuumadda uga warbixisay u jeeddada imaatinkooda Dhuusamareeb. Gud. Xaliimo ayaa faahfaahisay in ay Galmudug u yimaadeen furitaanka xafiis goboleedka Guddiga ee Dhuusa mareeb. Waxay sheegtay inay maalmaha ay joogaan Dhuusamareeb ay tartamayaal badan oo araajidooda shaqo soo dirsday ay imtaxaan ka qaadi doonaan ayna ka xulan doonaan kuwa ugu mudan oo dardar gelin kara hawlaha doorashooyinka ee laga qabanayo dowlad goboleedka.
Ka dib markii uu dhegeystay warbixinta Guddiga, madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamad Shaakir ayaa uga mahad celiyay Guddiga sida hagar la’aanta ah ee ay ugu dadaalayaan in ay waddanka gaarsiiyaan doorashooyin qof iyo cod ah. Waxa uu u ballanqaaday in Galmudug ay Guddiga kala shaqeyn doonto in ay ka soo baxaan waajibaadkooda, uuna xaqiijin doono in hawsha shaqaaleynta ay u yimaadeen Dhuusamareeb ay u qabsan doonaan si madaxbannaan oo aysan cidna faragelin doonin.
Sheekha ayaa sidoo kale Guddiga u soo jeediyay dardaaran dhaxal gal ah. Waxa uu ugu baaqay midnimo, caddaalad iyo in ay u dhexeeyaan ummadda Soomaaliyeed oo ay ka soo baxaan ammaanadii loo dhiibtay. Waxa uu sheegay in si amniga waddanka loo sugo ay lagama maarmaan tahay in dadka Soomaaliyeed ay midoobaan. Isaga oo ka hadlayay Al-shabaab waxa uu yiri, “Shabaabka roobkoodu waa tafaraaruqa dadka Soomaaliyeed, abaartooduna waa midowga iyo isku duubnida dadka, sidaa darted midowgu waa noo muhiim si aan uga adkaanno Shabaab”
Ugu danbeynta Guddiga ayaa uga mahad celiyay madaxa xukuumadda soo dhoweynta iyo wadashqeynta joogtada ah ee maamulka Galmudug.